२ बर्षको छोरी भइसक्दा पनि कोरियाबाट माया गर्छन आफ्नो पूर्व प्रमिकालाई, पढौं मर्मस्पर्शी प्रेम कहानी – Eps Sathi
February 10, 2022 715
कुनै कुनै सम्बन्ध यस्तो अमर हुन्छ जसलाई कुनै पनि कुराले रोक्न छेक्न सक्दैन। विवाह अघिको सम्बन्ध विवाह पछि पनि कायमै रहन सक्दछ। सँगै जीवन विताउने वाचा गरेका जोडी नियतिले आ-आफ्नै बाटो लागेर अरु कसैसँग विवाह भएर छोरा छोरी समेत भइसक्दा पनि आफ्नो पुरानो सम्बन्धलाई कायम निभाउने पनि हुन्छन। यस्तै नियति भोग्नुपरेको एक जोडीको कहानी केटीले फेसबुकको एउटा कन्फेसन पेजमार्फत सार्बजनिक गरेकी छिन। आज उनले कन्फेस गरेको कुरा जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरेको छु।
“नमस्ते सबैजनालाई। मलाई तपाईहरुको सहयोग चाहिएको छ। कृपया यो पोष्ट सिरियस्ली पढ्नुहोला। म एक विवाहित महिला हुँ। मेरो एक छोरी पनि छिन। विवाह भन्दा अगाडी मेरा केटा साथीसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको थियो। हाम्रो सम्बन्ध ४ बर्षसम्म राम्रोसँग चलिरहेको थियो। तर ४ बर्षको सम्बन्ध पछि उ कोरिया गयो। उ कोरिया गइसकेपछी पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रैसँग चलिरहेको थियो। मेरो घरमा सौतेनी आमा थिइन। सौतेनी आमा भएका कारण पनि होला घरमा दिनहुँजस्तो झगडा भइरहन्थ्यो। जे कुरामा पनि मलाई नै दोषि बनाइन्थ्यो। मलाई नै गाली गरिन्थ्यो। यस्तै तरिकाले धेरै दिनहरु बिते। त्यसपछि मैले कोरियामा रहेको मेरो प्रेमीलाई मलाई विवाह गरि लैजान भने। तर उसले अहिले आफू विवाह गर्न तयार नभएकाले तत्काल विवाह हुन नसक्ने बतायो।
यता मलाई आफ्नै घरमा बस्न नसक्ने अवस्था थियो। मैले धेरै पटक सौतेनी आमाको गाली तथा पिटाई खानुपर्थ्यो। सौतेनी आमाले यस्तो व्यवाहार म माथि गर्दा समेत मेरो बाबा बोल्न सक्नु हुन्न थियो। मलाई त्यो घरबाट जसरी पनि उम्कनु थियो। मेरो एउटा साथी जस्तै केटा थियो। हामी बोलचाल गर्न थालेको धेरै समय पनि भएको थिएन। मैले बाध्य भएर त्यही केटासँग भाग्ने निर्णय गरेँ। भागेपछि आफ्नो घर परिवार, साथी भाइ र कोरियामा रहेको प्रेमी समेतबाट टाढा भए। सबैसँग सम्पर्क विहिन रहें।
तर मेरो नियति नै खोटो रहेछ। विवाह पछि पनि मैले सुख पाइन। विवाहको केहि दिनपछि नै श्रीमानले हेला गर्न थाले। विवाह पछि पनि मेरो जीवनमा राम्रा दिन कहिल्यै आएनन। न त बूढाको राम्रो साथ पाएँ न त परिवारको। विवाह पछि केहि महिना राम्रै भएपनि पछि पछि भएपछि सबैले गाली गर्ने कुट्ने गर्न थाले। आफ्नै बूढाको गाली तथा उसको परिवारको टर्चर एकदमै हुन थाल्यो। जिउभरी निलडाम हुन्थ्यो। जता सुकै गएपनि जा भन्थे।
विस्तारै मेरो पहिलाकै प्रेमीसँग कुरा हुन थाल्यो। विवाह भएको ३/४ बर्षपछि समेत कोरियामा रहेका मेरा पूर्व प्रेमीले मलाई उत्तिकै माया गर्न थाले। मेरा हरेक दुखमा साथ दिन थाले। मेरो उसँग कुरा हुन थालेको धेरै भयो। आजकल कुरा गर्दा पूर्व प्रेमीसँग मायाको भावना जागेर आउँदछ। यस्तो अवस्थामा म के गरौं? उकुस मुकुस भएर यहि पेज मार्फत कन्फेस गर्दैछु। कृपया मलाई सहयोग गर्नुहोला। मेरो पूर्व प्रेमीलाई म यो कुरा भन्न पनि सकिरहेको छैन कि मलाई तिमिसँगै लैजाउ भनेर। उसको पनि आफ्नै जीन्दगी छ। उसले पनि केहि सोचेको होला। यता म बूढाको घरमा दिनहुँ गाली र कुटाइ खाएर पनि बस्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा मैले के गर्दा उचित होला? हजुर हरुको सहयोग र सुझावको अपेक्षा गरेकी छु।”
Prevइजरायलबाट नेपाल पुगेको ४ दिनमै ४५ बर्षिया अर्चना चोङवाङको नि’धन
Nextकृषि ज्ञान सिकाउन बाणगंगा नगरपालिकाले ५०० जनालाई कोरिया पठाउने